နယူးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု ပထမဆုံးအကြိမ် ကျဆင်း၊ အိန္ဒိယမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး မီးပိတ်ပြီး ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်း
နယူးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု ပထမဆု...
6 เม.ย. 2563 - 09:11 น.
(၁) ကိုဗစ်၁၉ လူနာ နံပါတ် ၄ မှာ နှစ်ကြိမ် ဆက်တိုက် ပိုးမတွေ့ အဖြေ ထွက်ရှိပြီ
မန္တလေး၊ ကန်တော်နဒီဆေးရုံမှာ တက်ရောက်ကုသနေတဲ့ ကိုဗစ်၁၉ လူနာ နံပါတ် ၄ မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိမရှိ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက် နှစ်ကြိမ်လုံးမှာ ပိုးမတွေ့အဖြေထွက်ရှိတယ်လို့ မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာစုစုဒွေးက ဘီဘီစီကိုအတည်ပြုပါတယ်။
လူနာနံပါတ် ၄ ကို ကိုဗစ်၁၉ ရောဂါပိုးရှိမရှိ စုစုပေါင်း လေးကြိမ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သုံးကြိမ်နဲ့ လေးကြိမ်မြောက်မှာ ပိုးမတွေ့ရှိတဲ့အဖြေကို ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက်တာစုစုဒွေးက ပြောပါတယ်။
"လက်ရှိတော့ သူ့ကို ဆေးရုံမှာပဲ facility quarantine ဆက်ထားမှာပါ။ WHO(ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့) ဂိုက်လိုင်းအတိုင်း ဆက်သွားမှာပါ။ ပိုးမတွေ့တော့ပေမယ့် နောက်ထပ် ၁၄ ရက် ထပ်ပြီး ဆေးရုံမှာပဲ ဆက်ထားရမှာပါ။ သူ့ဇနီးမှာ ဆေးစစ်ချက်အရ ရောဂါပိုးမရှိပါဘူး။ သူနဲ့အနီးကပ်ထိတွေ့ခဲ့တဲ့ မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း ကျွန်မတို့ Home quarantine(နေအိမ်မှာ ကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ခြင်း) လုပ်နေဆဲပါ။ အားလုံးအခြေအနေကောင်းပါတယ်" လို့ ဒေါက်တာစုစုဒွေးက ပြောပါတယ်။
လူနာနံပါတ် ၄ ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကို နဒီမြန်မာဟိုတယ်မှာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေတာဖြစ်ပါတယ်။
လူနာနံပါတ် ၄ ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပြီး မတ်လ ၅ ရက်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို သွားရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံကို မတ်လ ၁၉ ရက်မှာ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ မတ်လ ၂၅ နံနက်မှာ ချောင်းဆိုးပြီးလည်ချောင်းနာလာတာကြောင့် ဆေးရုံသွားပြရာက မတ်လ ၂၇ ရက်မှာ ကိုဗစ်၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ မန္တလေးမြို့မှာ ပထမဆုံး ကိုဗစ်၁၉ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူလူနာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးရုံဆင်းခွင့်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ ပိုးမတွေ့အဖြေ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်တွေ့ရှိခြင်း၊ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖျားကြာမြင့်ချိန်အရေအတွက်၊ တိုးတက်လာတဲ့ အဆုတ်လက္ခဏာ စတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ပြည့်စုံရင် ဆေးရုံက ဆင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လတ်တလောမှာ ကန်တော်နဒီမှာ ဒီလူနာတစ်ဦးတည်းပဲရှိတဲ့အတွက် စိတ်ချရအောင်ဆေးရုံမှာပဲ ၁၄ ရက် ဆက်လက်ထားရှိစောင့်ကြည့်မယ်လို့ ကန်တော်နဒီဆေးရုံက နီးစပ်သူတစ်ဦးက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
မြန်မာမှာ ဧပြီ ၆ ရက် မနက်ပိုင်းအထိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာ ၂၁ ဦး၊ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်လူနာပေါင်း ရာနဲ့ချီရှိနေပါတယ်။
(၃) နယူးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု ပထမဆုံးအကြိမ် ကျဆင်း
အခြေအနေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာမျိုး ပြောဖို့ စောလွန်းသေး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်ပွားရာ ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ့ နယူးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်ပွားသေဆုံးတဲ့အရေအတွက်ဟာ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျဆင်းသွားတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို သိရဖို့တော့ စောလွန်းသေးတယ်လို့ နယူးယောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အင်ဒရူးကူမိုကပြောပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ အမေရိကန်တဝန်း ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်ပြီး အခြေအနေက ဆိုးရွားနေသေးတယ်လို့ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားပါတယ်။
ဒီအခြေအနေဟာ အမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်အခက်ခဲဆုံးနဲ့ ဝမ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံး သတင်းပတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ အမေရိကန် ခွဲစိတ်ဆရာဝန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဂျယ်ရမီအဒမ် က သတိပေးပါတယ်။
"ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ ပုလဲဆိပ်ကမ်းအဖြစ်အပျက်လို၊ နိုင်းအလဲဗင်း အဖြစ်အပျက်လို အခိုက်အတန့်မျိုး ဖြစ်လာနေပါတယ်"လို့ ဖောက်စ်နယူး သတင်းဌာနကို သူက ပြောခဲ့တာပါ။
ဒါဟာ ဒေသတွင်းတစ်ခုတည်း ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲ တစ်နိုင်ငံလုံး ဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီး ဒီအခြေအနေကို အမေရိကန်တွေနားလည်စေချင်တယ်လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။
အမေရိကန်တလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃၃၁,၀၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၉,၄၀၀ ကျော် ရှိသွားပါပြီ။
အမေရိကန်ပြည်သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်မထွက်ဘဲ နေဖို့ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန်ပြည်သူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကို အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနေကြဖို့ ကန့်သတ်မှုတွေ လုပ်ထားတဲ့ကြားက ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုနဲ့ သေဆုံးနှုန်းကလည်း ဝါရှင်တန်ဒီစီ၊ ဒက်ထရိုက်နဲ့ နယူးအော်လန်းစ် ပြည်နယ်တွေမှာ တိုးလာနေပါတယ်။
ဒေသန္တရ အာဏာပိုင်တွေက အသက်ရှူစက်နဲ့ နှာခေါင်းစည်းလို ဆေးပစ္စည်းတွေ အလွန်အမင်း ရှားပါးပြတ်လပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း တစ်ချိန်လုံး သတိပေးနေကြတာပါ။
နယူးယောက်နဲ့ ထိစပ်နေတဲ့ နယူးဂျာစီပြည်နယ်မှာဆို မနေ့က တနင်္ဂနွေတစ်ရက်တည်းမှာ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၃,၀၀၀ ကျော် ရှိနေပြီး တစ်ပြည်နယ်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဆို ကူးစက်သူပေါင်း ၃၇,၀၀၀ ကျော် ရှိလာပါတယ်။ သေဆုံးမှုကတော့ ၉၁၇ ဦး ရှိနေပါတယ်။
ဗိုင်းရပ်စ်ဒဏ်ကို နောက်ထပ် ဆိုးဆိုးရွားရွားခံနေရတဲ့ လူဝီစီးယားနားတောင်ပိုင်းမှာ မနေ့က ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူပေါင်း ၃ ထောင်ကျော်နဲ့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူကတော့ ၄၇၇ ဦးထိရှိပါပြီ။
ဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု တတိယအဆိုးဆုံး မီချီကန်ပြည်နယ်မှာ ကူးစက်သူပေါင်း ၁၆,၀၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၆၁၇ ဦးရှိတယ်လို့ အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။
ဒက်ထရိုက်မှာတော့ ကူးစက်သူပေါင်း ၅,၀၀၀ နီးပါး ရှိလာပြီး သေဆုံးသူ ၁၅၈ ဦး ရှိနေပါတယ်။
ကူးစက်ရောဂါကျွမ်းကျင်သူ ဆေးပညာရှင် ဒေါက်တာ အန်တိုနီဖာစီကတော့ သမ္မတထရမ့်ပြောပြောနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာမျိုး ပြောဖို့ စောလွန်းသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အဒမ်ကလည်း ကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ ဝါရှင်တန်တို့မှာ ကူးစက်မှုနှုန်း တဖြည်းဖြည်း ကျလာတယ်ဆိုပေမယ့် လူကြားထဲသွားရင် နှာခေါင်းစည်းတပ်ရမယ်ဆိုတာအပါအဝင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်ချက်တွေကို လူတိုင်း မဖြစ်မနေလိုက်နာရမယ်လို့ သတိပေးထားပါတယ်။
(၄) အိန္ဒိယမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး မီးပိတ်ဖယောင်တိုင် ထွန်းဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းချက်ဝေဖန်ခံရ
ကိုးမိနစ်ကြာ လျှပ်စစ်မီးမထွန်းဘဲနေဖို့ ဝန်ကြီးချုပ်က တိုက်တွန်းခဲ့
အိန္ဒိယပြည်သူတွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် တိုက်ဖျက်ရေးမှာ တစ်စုတစ်စည်းတည်းရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသတဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံတဝန်း လျှပ်စစ်မီးတွေ ပိတ်ပြီး ဖဖောင်းတိုင်ထွန်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် နရင်ဒရာမိုဒီက မနေ့က ဒေသစံတော်ချိန် ၉ နာရီမှာ လျှပ်စစ်မီးမထွန်းဘဲ ကိုးမိနစ်ကြာ နေကြဖို့ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလျံ ရှိတဲ့ အိန္ဒိယပြည်သူ တွေကို တိုက်တွန်းခဲ့တာပါ။
ပြည်သူတွေ ဖယောင်းတိုင်တွေ ၊ မီးအိမ်တွေထွန်းပြီး ကိုဗစ်၁၉ ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုကို အံတုဖို့ သူက တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သန်းပေါင်းများစွာသောပြည်သူတွေကလည်း ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မီးတွေပိတ် ၊ ဖယောင်းတိုင်တွေထွန်းပြီး တစ်စုတစ်စည်းတည်း ရှိကြောင်း ပြခဲ့ကြပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် သေသူ တစ်ရာကျော်ရှိ
ဒါပေမဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ ဒီလုပ်ရပ်ကို စတန့်ထွင်တယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက စွပ်စွဲပြီး ကပ်ရောဂါကြောင့် တိုင်းပြည်ကြုံနေရတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ စီးပွားရေး အကြပ်အတည်းတွေကနေ အာရုံလွှဲတာလို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။
ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့က တစ်နိုင်ငံလုံးကို အိမ်ထဲက အိမ်ပြင်မထွက်ရဘူးလို့ ကန့်သတ်ခဲ့ပြီး သန်းနဲ့ချီတဲ့ အိန္ဒိယပြည်သူတွေ
အိန္ဒိယမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားသူ ၃,၅၀၀ ကျော်နဲ့ သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ ဂျွန်စ်ဟော့ကင်းစ် တက္ကသိုလ်က ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ့်အချက်အလက်တွေအရဆိုရင်တော့ ဒီနှုန်းထားထက် ပိုများမယ်လို့ ယူဆကြပါတယ်။
အိန္ဒိယမှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးနိုင်တဲ့နှုန်းအနိမ့်ဆုံး နိုင်ငံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
อัลบั้มภาพ နယူးယောက်မှာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှု ပထမဆုံးအကြိမ် ကျဆင်း၊ အိန္ဒိယမှာ ဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး မီးပိတ်ပြီး ဖယောင်းတိုင်တွေ ထွန်း